अमेरिकाको यस्तो थियो खतरनाक योजना महरा फसाउने, देव गुरुङ पनि धरापमा — Imandarmedia.com
१एमाले एकता जोगाउन पहल गर्ने नेपाल समूहको निर्णय
२पूर्व माओवादीका ४ नेताको सांसद पद खारेज, सर्वोच्चले यस्तो आदेश दिएपछि क-कसलाई झट्का ?
३एमालेका ४ सांसद पदमुक्त हुँदा मुख्यमन्त्री शाही सुरक्षित, यस्तो छ रहस्य
४बुवा पारसले हेलमेट नलगाएपछि छोरी कीर्तिकाले गरेको यस्तो ट्वीट बन्यो भाइरल, त्यस्तो के लेखेकी थिइन् ?
५लुम्बिनीमा नयाँ सरकार बनाउन अन्तिम कसरत, यसरी हुँदैछ शंकर पोखेरलको बहिर्गमन
६एक्ला ठाकुर- घर छैन, श्रीमती र छोराको मृत्यु भयो, अन्त्यमा पार्टी विहिन
७सचिव सरुवामा प्रचण्ड हावि, ढुकुटी भ्वाङ पार्नेलाई अर्थको जिम्मा
८भारतविरुद्ध मैदानमा प्रचण्ड: देउवा सरकारलाई उचाले जुरुक्कै, अब के गर्लान मोदी ?
९सभापति खुस्किने महाधिवेशन किन गर्छन् देउवा ?
१०अब लाइसेन्सको ट्रायल खुल्ने, यस्तो छ सरकारको तयारी
११गठबन्धनमा दौडधुप, मन्त्रीका लागि शक्ति केन्द्र धाउदै
१२हेलम्बु र मेलम्ची क्षेत्र ऊच्च जोखिममा – यस्तो छ विज्ञ टोलीको निस्कर्ष
अमेरिकाको यस्तो थियो खतरनाक योजना महरा फसाउने, देव गुरुङ पनि धरापमा
अमेरिकाले नेपाललाई भुटानको स्तरमा झार्दै भारतलाई खुसी पार्ने गरी ‘मिलेनियम च्यालेन्ज’ अन्तर्गत दिने भनिएको ५५ अर्ब सहयोगसम्बन्धी विधेयक सदनमा पेस गर्न दबाब दिएको थियो । महरालाई उक्त काम नगरे पद धरापमा पारिदिने धम्की ३ महिनाअगाडि नै दिइएको थियो । निवर्तमान सभामुख महराले गम्भीरतापूर्वक लिएनन् । महराको कमजोर ठाउँ ढुकेर बसेका गुप्तचरहरूले उनलाई यौन मुद्दामा फसाए ।
प्रम केपी वलीले ‘मिलेनियम च्यालेन्ज’ अन्तर्गतको अमेरिकी सहयोग नआउनुमा महरा जिम्मेवार भएको असान्दर्भिक आरोप लगाउनुले पनि वलीकै निर्देशनमा घटनाको तारतम्य भएको अनुमान छ । त्यसैगरी प्रम वलीले नै काठमाडौँ जिल्ला अदालतका न्यायाधीशलाई महरालाई थुनामा पठाउन दबाब दिएको हल्ला राणाकालमा प्रजापरिषद्को प्रचारझैँ फैलिएको छ । महराले पेस गर्ने र देव गुरुङले ‘ह्विप’ जारी गर्ने निर्देशन भइसकेको थियो ।
अमेरिकी सेनाले सशस्त्र प्रहरीलाई ‘प्रतिविद्रोह, प्रतिआतङ्कवाद र भूकम्प उद्धार’ तालिम दिएको (साउन ६–असोज ६) चार दिनपछि हिन्द–प्रशान्त रणनीतिको ‘कन्ट्री अफिस’ राख्नका लागि पाँचखाल, काभ्रे प्रस्ताव गरेको थियो । जनदबाब र चीनको दबाबका कारण मात्र हिन्द–प्रशान्त रणनीति धिमा गतिले अगाडि बढेको छ । जासुसी सेटेलाइट र मिसाइल चार्ज गर्न हाई भोल्टेज आवश्यक पर्ने र हाई भोल्टेज दिँदा विषय खुल्ने भएकाले हाईएक्टेन्स लाइन भारत लग्ने योजना बनाइएको स्रोतको दाबी छ । पहिलो चरणमा पाल्पा, दोभानपूर्वको सिद्धबाबा डाँडाभन्दा पूर्वमा ती अमेरिकी जासुसी यन्त्रहरू रिचार्जको व्यवस्था हुन लागेको बताइन्छ ।
त्यसैगरी से फोक्सुन्डो ताललाई पनि अमेरिकी सेनाले गुपचुप हतियार भण्डारण केन्द्र बनाउन खोजेको स्रोतको दाबी छ । अमेरिकी प्रभाव रहेको सेनाको रेन्जर फोर्सलाई बटालियन स्तरमा विकास गरिएको छ । अमेरिकी योजनामा रेन्जर फोर्सको विकास भइरहेकाले देव गुरुङले उक्त फोर्स जनयुद्ध र गणतन्त्र दमनमा उत्रिएका कारण विघटन गर्नुपर्ने बताएका थिए । रेन्जर फोर्सले मुस्ताङलाई तालिमको केन्द्र बनाउने भएको छ जहाँ भारत र अमेरिकाको विशेष चासो छ ।
महरा गिरफ्तार भएलगत्तै एनडीआई नामक गैसस, एकजना पूर्वप्रधानमन्त्री, स्क्यान्डेभियन देशका राजदूतहरूले देव गुरुङलाई दबाब दिन थालेका छन् । अमेरिकी दबाबसँगै महराकाण्डपछि देव गुरुङ सार्वजनिक रूपमा हिन्द–प्रशान्त रणनीतिका विरुद्ध बोल्न छोडेका छन् । देव गुरुङ आत्मसमर्पण गरी अमेरिका भ्रमण गरेर ‘माइन्डवास’ गरी फर्केनन् भने जनयुद्धको कुनै घटनाको कथा बनाएर फसाउने निश्चित रहेको स्रोत बताउँछ । हरि शर्मा, कनकमणि दीक्षित, सुबोध प्याकुरेल, सुभास नेम्बाङ, माधव नेपाललगायतले अमेरिकी स्वार्थमा टुप्पी कसेर काम गरिरहेको बताइन्छ । डोल्पा फाउन्डेसन नामको अमेरिकी लगानीको गैससले डोल्पामा १५० मेगावाटको सोलार पावर राख्न अनुमति मागेको थियो तर उद्योगमन्त्री मातृका यादवले स्वीकृति दिएनन् ।
अमेरिकाले जासुसी यन्त्र चार्ज गर्न उक्त सोलारपावर जडान गर्न चाहेको थियो । उक्त अमेरिकी योजना रोकिदिएका कारण प्रम वलीले मातृकालाई मन्त्री पदबाटै घोक्र्याएका छन् । अमेरिकाले जरो गाड्यो भने आफूलाई पनि गाह्रो पर्ने दिल्लीको बुझाइ रहेको र दिल्लीकै निर्देशनमा मन्त्री यादवले अमेरिकी योजना लागू हुन नदिएको स्रोतको दाबी छ । अमेरिकाले अहिले मुस्ताङको युरेनियम खानीको मुख्य केन्द्र कब्जा गर्ने गरी सोलार पावर जडान गर्न उक्त स्थान मागेको छ तर स्वीकृत भएको छैन ।
उक्त प्रस्ताव स्वीकृत भएमा अमेरिकाले आफ्नो प्रोजेक्ट स्थल भन्दै मुस्ताङको युरेनियम नियन्त्रणमा लिनेछ । अर्कोतिर अमेरिकाको योजनामा स्क्यान्डेभियन देशहरूले उत्तरकोरियाको काठमाडौँस्थित दूतावास हटाउन सरकारलाई दबाब दिइरहेका छन् । कोरियाली लगानी फिर्ता त्यसैको कडी भएको बताइन्छ ।
अमेरिकी सेनाले नेपाली सेनालाई नै तालिम दिन चाहेको भए पनि सेनाले मौन अस्वीकृति जनाएपछि अमेरिकाले सशस्त्र प्रहरीलाई दुईमहिने तालिम दिएको थियो । राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका एक पूर्वअधिकृत भन्छन्, ‘जातीय वा धार्मिक दङ्गा गराएर सबै अग्रगामी शक्तिहरूलाई दबाउने षड्यन्त्र हुनसक्छ । यो खेलमा भने अमेरिका र भारत एकै बिन्दुमा पुग्न सक्छन् । काङ्ग्रेस (आई) कालमा भएको १२ बुँदे र नाकाबन्दीमा पछाडि हट्नुपर्ने स्थितिको कारण भएको क्षति असुलउपर गर्ने मनोकाङ्क्षा मोदीमा हुने नै भयो ।
हिन्द–प्रशान्त रणनीति र क्रिस्चियन धर्म राजनीतिका विरुद्ध विप्लव नेतृत्वको नेकपाले जनमत निर्माण गरिरहेका कारण अमेरिका चिढिएको छ । अमेरिकी निर्देशनमा नै वली सरकारले नेकपालाई प्रतिबन्ध लगाएको ठानिएको छ । स्मरणीय के छ भने दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनी एनसेलमा साउदी अरबको एक बहुराष्ट्रिय कम्पनीमार्फत अमेरिकी लगानी छ । त्यही कारणले पनि अमेरिका चिढिएको हुनसक्छ । वली सरकार र अरू थुप्रै व्यक्तिहरू अमेरिकी रणनीतिमा चीनविरुद्ध लागेका कारण नै चिनियाँ राष्ट्रपति सीले आफ्नो नेपाल भ्रमणको एक कार्यक्रममा ‘चीनका विरुद्ध लाग्नेको हड्डी पिस्ने’ धम्की दिएको ठानिन्छ ।
त्यो धम्की वली सरकारका दायाँबायाँका अमेरिकी पक्षधरलाई दिएको ठानिएको छ ।एकातिर अमेरिकाले ‘इन्डो–प्यासिफिक रणनीति’ अन्तर्गत आक्रामक सैन्य गतिविधि, हस्तक्षेप, दबाब र प्रचारयुद्ध तीव्र पारेको छ । अर्कोतिर भारतले नेपालको सीमा २३ जिल्लाका ७१ स्थानमा अतिक्रमण र कालापानी क्षेत्रमा फौजी हमला गरेको छ । तर सरकार र सदनमा सार्थक छलफल र भूमिका छैन । hamroeconomy.com बाट